I-Agenda-eFlorida yeHlabathi yeNtengiso Expo
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kwinyanga ka-Matshi, ngo-16 | I-18: 2021 kusasa ukuya kwi-9: 00 pm ET
Onke amaxesha nguMda weXesha leMpuma (ET)
NgoLwesibini, Matshi 16
IHolo eliKhulu livulwa
9:00 am - 9:10 kusasa
9: 10-6: 00 pm
Umboniso, iintlanganiso kunye nenethiwekhi
I-Webinar: Amathuba oShishino kunye nezibonelelo zokwenza ishishini eFlorida
Inkcazo: Abaphathi bamashishini abaphambili baya kwabelana ngezimvo zabo eFlorida njengendawo yenkulumbuso yeshishini.
Unobhala wezoRhwebo eFlorida
UMongameli kunye ne-CEO, Enterprise Florida, Inc.
I-FP & L
Usekela Sihlalo weBhodi
Iindleko zezabelo Embraer Aircraft Holdings, Inc.
Imbuyekezo America Energy, Inc.
UViceli oyiNtloko kaMongameli
Kuvalwa iholo enkulu
Emva kweeyure: Iqonga elibonakalayo liyafikeleleka emva kweeyure zokubonisa ukulungiselela iindwendwe kwiindawo ezahlukeneyo zamaxesha. Ungandwendwela iminquba kwaye ucele iintlanganiso kunye nababonisi ngeli xesha.
NgoLwesithathu, Matshi 17
9:00 am - 9:05 kusasa
9: 05-6: 00 pm
I-Webinar: Iziseko ezingalinganiyo zeFlorida kunye noLungiselelo
Inkcazo: Funda ngendlela iziseko zophuhliso zaseFlorida ezibonelela ngayo ngamashishini isiseko esiza kuthengisa iimpahla kunye neenkonzo zabo kubaxhasi behlabathi, ngakumbi abo bahlala eMelika.
Chamber of Commerce yaseFlorida
IBhunga leeNqwelo moya laseFlorida
I-Florida Customs Brokers kunye noMbutho wabaThumeli
NgoLwesine, Matshi 18
IWebinar: IHubhu yaseFlorida yeNtsha
Inkcazo: I-academy esekwe eFlorida kunye noosomashishini baya kuxoxa ngobuchwephesha obutshintsha umhlaba.
Sihlalo, uRhwebo lwaMazwe ngaMazwe noPhuhliso
IBhodi yaBalawuli be-EFI
UJames E. Taylor
IBhunga leTekhnoloji laseFlorida
UGqr Jason Hallstrom
NDIBONA, Florida Atlantic University
Ugqirha Ian White
UMseki, uMongameli kunye neOfisi eyiNtloko yezeNzululwazi
Funda nzulu ngobuchwephesha obukwi-State of Florida!
IZiko leNzwa yeeNjineli kunye neeNkqubo eziDibeneyo zoNjineli (I-SENSE) likhokelela kwimisebenzi eyunivesithi ngokubanzi kwiSensing nakwiiNkqubo zeSmart, enye yeentsika zophando ezine ze-FAU. Umsebenzi we-I-SENSE kukukhuthaza ukugqwesa kophando kwiiNkqubo zeSensing kunye neeSmart; kunye nokuphuhlisa, ukubonisa, nokusebenzisa izisombululo zeteknoloji ezinefuthe eliphezulu kwezentlalo. Iqela linamava amaninzi kuyilo, ukuthunyelwa, kunye nolawulo lwezixhobo zonxibelelwano zenethiwekhi. I-mission ikhokelwa liqela elinamandla ahlukeneyo aquka abasebenzi abahlanu, abantu abathandathu bezakhono, abaphandi abathathu basemva, abaqeqeshi abangaphezu kwama-60 kunye nabancedisi bophando abangaphezu kweshumi elinesibini. Umsebenzi weqela uxhaswa nge-AFRL, NSF, NIH, NIST, DOE, NOAA, kunye noomasipala kunye namaqabane eshishini.
Ukhuselo lweViolet lusebenzisa amandla okukhanya kwe-ultraviolet ukukhusela iindawo zemihla ngemihla kwizifo ezinobungozi ngokubulala ukuya kuthi ga kwi-99.9% ye-E. Coli, Salmonella, MRSA, C. diff., Norovirus, C. auris, kunye ne-coronavirus. Eyilelwe ukwenza ukubulala iintsholongwane kube lula, umgca wethu wemveliso ye-SAGE unikezela nge-UV yokubulala iintsholongwane kwindawo kunye nomoya kwiindawo ezahlukeneyo, kubandakanya ukhathalelo lwempilo, imfundo ye-K-12, imfundo ephezulu, amaziko ezemidlalo, ukubuka iindwendwe, izakhiwo zikarhulumente, kunye nezithuthi zothutho ezingxamisekileyo.
Ukhuselo lweViolet lubonelela kuphela ngesisombululo se-Xenon UV esaziwayo esinokufakwa kwigumbi elipheleleyo, lisenza indlela eqhubekayo yokujongana neemfuno zokubulala iintsholongwane. Iseti eguquguqukayo yezisombululo eziphathwayo zinika indlela yokuzisa ukungasebenzi kwe-UV xa kunye nalapho uyifuna khona kwimfuno. Itekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi emva koKhuselo lweViolet yenza ukuba kube lula ukubandakanya isisombululo phantse kuyo nayiphi na imeko.
Neobiosis, LLC ngumbutho wabucala wophuhliso lwekhontrakthi kunye nombutho wokuvelisa (CDMO) onendawo ezimbini zemveliso edolophini yaseGainesville kunye nophando kunye nophuhliso elebhu ngaphakathi kweSid Martin UF Innovate biotechnology Institute eAlachua, FL. Ugxininiso lwe-Neobiosis kukuhlukaniswa kwezicubu, iiseli kunye nee-vesicles zangaphandle (ii-EVs), ezinokubakho njengamayeza, kwizicwili zomzimba ezizalwayo, kubandakanywa intambo, umbilical cord igazi kunye ne-amniotic fluid. Igama Neobiosis ("ubomi obutsha") lisuselwe kuthotho lwezilingo ezibizwa ngokuba yiParabiosis ("ukuhlala kunye") apho kwafumaniseka ukuba izicwili, iiseli kunye nee-EV ezivela kumnikeli omncinci zinokusetyenziselwa ukukhuthaza ukuphiliswa kwabantu abadala. I-Neobiosis ivelisa iimveliso ezinokuvela kwimveliso esempilweni, yexesha elipheleleyo, kwimibutho yabathengi abanqwenela ukuthatha iimveliso zebhayomedical nangona i-FDA-ivume izilingo zeklinikhi zorhwebo kwintengiso yehlabathi. I-Neobiosis ikwazibophelele ekuqhubeleni phambili umbhobho ongaphakathi endlwini wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namayeza emvelo.
I-ajenda iya kutshintshwa.